नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : फलानाले हारे देश दुर्घटनामा जान्छ भन्या के हो ? : जगन्नाथ
फलानाले हारे देश दुर्घटनामा जान्छ भन्या के हो ? : जगन्नाथ
*******कोही व्यक्तिलाई आफ्नो छोरीले जित्नुपर्छ भन्ने लाग्ला। उनले जिते हुन्थ्यो भन्ने लाग्ला। तर, फलानाले जित्नैपर्ने भन्या के हो ? फलानाले हारे देश दुर्घटनामा जान्छ भन्या के हो ? कसैको छोरीले हारे कसरी मैले जिम्मेवारी लिने ? कुनै व्यक्ति प्रजातन्त्र मान्छु भन्ने अनि प्रजातन्त्रमा फलानाले हारे देश डुब्छ फलानाले जिते देश देश उँभो लाग्छ भन्ने तर्क यो २१ औँ शताब्दीमा यो समाजले ग्राहय ठान्छ ? मैले देश विदेशबाट आएको प्रतिकृया हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु कसैले पनि त्यो भनाइलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन। चितवनका जनता मात्रै होइन अन्य कसैलाई पनि पाच्य हुने कुरै होइन यो। अर्कोतिर यो गठबन्धन नै अप्राकृतिक छ। अब चुनाव आउन एक साता मात्रै बाँकी छ। जनताले मतमार्फत पक्कै जवाफ दिनेछन्। **************
स्थानीय निर्वाचन आउन साता दिनमात्रै बाँकी छ। देश नै चुनावमय भएको छ। अझ चितवनको भरतपुर गठबन्धन, विद्रोहका कारण चुनावी चर्चामा छ। बिहीबारको चुनावी सभामा प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका प्रमुख नेता चितवन आए । उक्त चुनावी सभामा प्रचण्डले रेनुले मेयर नजिते देश दुर्घटनामा जाने र त्यसको जिम्मा चितवन कांग्रेसले लिनुपर्ने बताएपछि तितो प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। भरतपुरको मेयरमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले प्रचण्डको भाषणलाई कसरी लिनुभयो त ? चितवनबाट प्रतिमा सिलवालले पौडेलसँग गर्नुभएको कुराकानी :
तँ ग्रिनकार्ड वाला होस् भनेर मेरो अगाडि आउनु म कानूनी उपचारमा जान्छु। यो बकवास हो। पूर्वाग्रह हो। घटिया टिप्पणी हो। निर्वाचनमा कमजोर बन्छ भन्ठानेर यस्तो कपोलकल्पित टिप्पणी गर्दै हिँड्न मिल्दैन। कसैले मेरो अगाडि टिप्पणी गर्छ भने कानूनी उपचारमा जान्छु। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार